Apple | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Izindlela ezinhle kakhulu zama-apula amaqanda ebusika
Ama-apula amahlumela ebusika ingenye yezindlela ezinhle kakhulu zokudla ubusika bakho obuzuzisayo futhi obucebile amavithamini. Ngenxa yezindleko zabo eziphansi futhi kulula ukuvuna, lezi zithelo zisetshenziselwa ukupheka. Abesifazana abakhathazekile bayazi izinkwa eziningi ezivela ema-apula abanda amaqanda, okuzosiza umzimba ubuthakathaka ebusika.
Izakhiwo eziwusizo nokuphikisana kwama-apula omisiwe: ukuvuna nokugcina
Ukumisa kuyindlela elula yokuvuna ama-apula ebusika. Ngenxa yokwakhiwa kwamakhemikhali ahlanzekile, ama-apula omisiwe anempahla eminingi yokuphulukisa. Ukumisa i-Apple kusetshenziselwa ukupheka: ngaphezu kwe-compote eyaziwa kakhulu, basetshenziselwa ukwenza amaphayi, ama-pancake, ama-saladi, i-jelly, eyengezwe ku okusanhlamvu netiyi, futhi idliwe eluhlaza.
Izithako zokupheka ze-apula ebusika
Kwabaningi bethu, ama-apula ekheniwe ebusika, njengama-compotes, ama-juice kanye namanye amalungiselelo, ahlotshaniswa neholidi kanye nezingane ezingenasidingo. Futhi amabhandeti, lapho, ngaphandle kwama-apula, kunezinye izithelo namajikijolo, asilethe emakhazeni abanda ebusika izinkumbulo zensimu yezithelo ezimnandi. Ngaphezu kwalokho, ukuvuna ama-apula kuhle kakhulu empilweni, ngoba ebusika sivame ukungabi namavithamini.
Indlela yokutshala izinhlobo ze-apula Jabulela ensimini yakhe
I-Apple Tree Delight idonsela abalimi ngencazelo ehlukahlukene. Izithelo zalo ziheha ubukhulu obukhulu, izinhlangothi ezibomvu zokuphuza umlomo neziphunga elimnandi. Ukunambitheka kwabo okumnandi nama-raspberry amanothi nokukhanya komunyu kuyisithakazelo. Ngaphezulu nokuvuthwa kokuqala kwezihlahla ze-apula, ukumelana kwazo nezifo kanye nesithwathwa. Ake sizame ukuqonda izinzuzo nezindleko zalolu hlobo oluhlukahlukene lwe-dessert, kanye nokuhlaziya izici zomuthi ekunakekeleni.
Izikhala ze-Apple ebusika ngokwezindlela zokupheka ezitholiwe zizoba usizo oluwusizo ekudleni kwansuku zonke. Ngokugcinwa kobuchwepheshe bokulungiselela, le mikhiqizo ngeke ijabulise abathandi be-apple kuphela ukunambitheka kwayo okuhle, kodwa futhi iyoba ngumthombo wangempela wamavithamini emzimbeni. Uyazi? Kuwo wonke amidwebo aseRussia Yasendulo, iNsimu yase-Edene yayitshalwe ngezihlahla ze-apula.
Indlela yokupheka i-apple cider ekhaya
Sivame ukwenza ama-apula avela ku-jam, okwenza amazambane ahlambulukile kanye nama-jellies, ukuvala ama-compotes noma ukuwafaka njengokugcwalisa amaqebelengwane, kodwa lezi akuzona zonke izindlela ezisebenzisekayo zesithelo, ngakho-ke ungazama ukwenza i-cider esiphundu futhi enempilo njengenye indlela. Uhlobo luni lwesiphuzo nendlela yokwenza ekhaya - funda ku.